FIHETSIKA FOTOTRY NY ANKOHONANA: » ZAVA-DEHIBE AMIN’NY FANABEAZANA NY ZAZA NY FIARAHA-MISALAHIN’NY RAY SY RENY
On nov 30, 2019 10 862
Nanatontosa: Zamany Anthony- Mpianatra (kilasy 1é L- Lisea Ambohidratrimo)
Tontosaina etsy amin’ny Parvis, Analakely, na ny tokontany malalaky ny lapan’ny tanàn’Antananarivo, ny telo andro natokana hanaparitahana ireo fihetsika fototra ho an’ny ankohonana. Androany, niompana tamin’ny fanentanana isan-tsokajiny ireo fihetsika 17 tokony, ho fomba fiainana eny anivon’ny fianakaviana ny fandaharam-potoana. Anisan’ny nahazo ny anjarany manokana ny ankizy, tamin’ny fanentanana nataon’i Momota.
Nitohy tao amin’ny efi-trano fanaovana famelabelaran-kevitra koa ny fifampizarana traikefa teo amin’ny karana manampahaiza mifandraika amin’ny lohahevitra, sy ny mpanatrika. Ny sakafo maroloko sy mirindra, ny fanasana tanana no nanamarika ny tapakandro maraina. niovitra tamin’ny fifanakalozan-kevitra ny maha zava-dehibe ny fandraisana anjaran’ny ray aman-dreny amin’ny fibeazana sy fitaizana ny zaza. Samy resy lahatra ny rehetra fa manana adidy lehibe ny raim-pianakaviana manokana, raha amin’ny fikarakarana ny sakafo.
Mbola anisan’ny firenena misedra ny olan’ny tsy fanjariana sakafo i Madagasikara, raha ny fanzavana nomen’ny mpanao Gazety Rasolonjatovo Nathalie, izay anisan’ny mpandahateny, momba ny resaka fandrindrana ny sakafon-jaza. » Mbola betsaka ny ezaka, mila jerena ny fifandanjana eo amin’ny aty an-drenivohitra sy ny amin’ny faritra tahaka ny any atsimon’ny Nosy », hoy izy. Ny eto anivon’ny foibem-pirenena momba ny sakafo kosa dia nitondra ny anjara birikiny tamin’ny fomba fikarakarana sakafo ara-pahasalama sy ny fatra sahaza ny zaza arakaraka ny taonany. Nifandrimbona, nanome ny traikefany kosa ny avy amin’ny Gret sy Action contre la faim, tamin’ny lohahevitra momba ny sakafo.
Anisan’ny nahasarika ny mpanatrika koa ny mikasika ny fanasan-tanana amin’ny savony, izay betsaka tamin’ny mpanatrika no tsy mahafantatra akory ny ivon’ny fanentanana mahakasika izany. Renim-pianakaviana iray, Ratoa Françoise, tomponandraikitra amin’ny sekoly tsy miankina, eny 67 dia naneho ny olana izay sedrainy, amin’ny tsy fahafahan’ny mpianany misitraka ny fahafahana manasa tanana izay. » Hoy anay dia tsy arakaraka ny zavatra ataon’ny ankizy any ampianarana ny fahafahany manasa tanana. Tsy afaka manao izany izy rehefa avy milalao, na hisakafo amin’ny trano voatokana amin’izany satria tapaka ny rano, manomboka amin’ny 6 ora maraina, hatramin’ny 4 ora folakandro. Efa miezaka izahay manabe manenjika ny ora fisokafan’ny paompy amin’ny 5 ora hatramin’ny 6 ora maraina, ihany isan’andro, mividy ny iray bidao 30 Ariary. Saingy tsy maharaka izany« , hoy nizara ny traikefa iainan’izy ireo.
Ny mpanao gazety Riana Raymond, nisolo-tena ny fikambanan’ny vehivavy mpanao gazety vehivavy na ny AFJM, kosa dia nitondra ny hetahetan’ny mponina any amin’ny tapany atsimon’ny nosy amin’ny tokony hijerena akaiky ny reny sy ny zaza, ary ny mponina amin’ny ankapobeny. » Zary atao ankilabao ny mponina, hany ka na dia miaina anaty fahadiovana, manasa tanana aza ny mponina dia mandeha ila ihany izany. Tsy fantatry ny olona akory ny tena vontoatiny sy ny maha zava-dehibe ny fihetsika fototra eny anivon’ny ankohonana. Tsy tokony hatao ho an’ny tanan-dehibe ihany ny fanentanana tahaka izao, fa milevalatra any ambanivohitra. », hoy izy nandritra ny fandaharan-teny nataony.
Mbola hitohy rahampitso ity, hetsika manokana ity, izay tohan’ny UNICEF-MADAGASCAR vola sy ara-teknika ity. Tsiahivina fa minisitera maro anatin’ny governemanta no miara-misalahy amin’ny fanatanterahana ny telo andro fanentanana momba ny » Fihetsika Fototra eny anivon’ny ankohonana ».
CNAPS MADAGASCAR: LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL, MAMY RAKOTONDRAIBE ENTRE EN FONCTION
RUGBY: VONONA NY HANDRESY NY NIGERIANINA NY XV MAKIS -MADAGASIKARA